I-ATTO izobonisa Imikhiqizo yokuxhumana okusha yeSitoreji @IBCShow - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » I-ATTO izobonisa Imikhiqizo yokuxhumana okusha yeSitoreji @IBCShow
I-ATTO izobonisa Imikhiqizo yokuxhumana okusha yeSitoreji @IBCShow
Ukuxhumana yinto ebalulekile ethembeni lokusebenza kahle kwezobuchwepheshe. Lokhu kungabaluleka kakhulu ngokuvela okuqhubekayo kokuthi isiko ledatha yethu yedijithali yenzeka manje lapho ukuphathwa nokugcinwa kudlala indima ebaluleke kakhulu ekusingatheni idatha. Lapho inani lemininingwane liqhubeka landa ngokushesha, bese-ke yenza izindlela nezidingo zendlela egcinwa futhi ihanjiswa ngayo. I-ATTO'S isiqubulo senkampani sithi "The Power Behind the St Isit," futhi ngokwezinga elikhulu, ngokuqinisekile siphile ngokuhambelana nalelo siqubulo. Kusukela ngohlobo lwayo ngoNovemba we1988, I-ATTO Technology ulethe ngempumelelo izixazululo ezisezingeni eliphezulu zokugcina ukuze isitoreji singcono, siphathe futhi silethe idatha.
Ukuba ngumkhiqizi wama-adaptha ama-adaptha, ama-adaptha enethiwekhi, abalawuli besitoreji, kanye nama-adaptha weThunderboltTM, i-ATTO ayikaze yehluleke ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme lokuxhumana kuyo yonke indawo yokugcina, kufaka phakathi i-Fiber Channel, i-SAS, i-SATA, iSCSI, i-Ethernet, i-NVMe ne-Thunderbolt. Uma noma iyiphi inkampani ingaphila ngokuthunyelwa kwayo ngempumelelo kakhulu kunalesi sikhulu se-tech, khona-ke i-ATTO yi "Power Behind the St Isit." I-IBC 2019 ingqungquthela engaphansi kwenyanga kude, i-ATTO izobuye ibonise ukuthi kungani ingahlangana ne-4K ne-8K yokuxhumana kokudalwa kokuqukethwe okudingwa yizo zonke izinhlobo zokugcina nezinhlobo zenethiwekhi uma ikhombisa imikhiqizo yayo yokuxhumana yokugcina entsha. Le mikhiqizo esanda kwethulwa izothuthukisa ukuthi kungani inkampani ikwazile ukukhangisa kuyo yonke imakethe ye-IT kanye nabezindaba kanye nezokuzijabulisa ngaphandle kokusilela kobuchwepheshe nokukhula okuqhubekayo kokuphathwa kwedatha nokugcinwa kwedatha.
I-ThunderLink NS 3252 Thunderbolt 3 to 25Gb Kanye ne-ATTO 360 Yenza Isikweletu Sabo E-BC 2019
Kuze kube manje, konke Imikhiqizo yakwaThuli Thuolbolt bakhombisile ikhono labo lokusebenzisa ngokuphelele ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokusabalalisa idatha, osebenza ukukhulisa ngokuphelele izinqubo ze-CPU ukuletha ukudluliswa kwedatha okubushelelezi nokuthembekile ngokusebenza okuphezulu kakhulu okungaguquki. Manje, ngokwembulwa okusha thunderLink NS 3252 Thunderbolt 3 to 25Gb, ochwepheshe bezobuchwepheshe bazomangala ukuthi isiphi isandisi sokuxhuma esihle kakhulu esisebenza ngokungagudluki ekuhlinzekeni ukuguquguquka okumangazayo nokuxhuma okugcwele ezindaweni zokudala okuqukethwe ze-bandwidth. Izosebenza futhi njengesixhumi esikhulu sokuxhumana sokumemezela okusha iMac Pro®, lo I-Apple Mac Pro®, Futhi IMac mini®. Lo mkhiqizo omusha we-Thunderbolt futhi unenzuzo yokulungiswa kwamachweba amabili, into ephansi yefomu, kanye nokuxhumana kwe-Thunderbolt 3. Amandla we-bandwidth we-ATTO ThunderLink® NS 3252 25GbE esekela ukudluliswa kwefayela levidiyo le-4K futhi aboniswe esikalini ngasikhathi sinye ngokufakwa kwamamojula we-SFP28 plugable. Futhi ukwethulwa ku-IBC 2019, kuzoba I-ATTO 360 Tuning, Ukuqapha kanye ne-Software Analytics, okuyithuluzi elinezinhloso zonke lokusebenziseka kwenethiwekhi ye-Ethernet, elisebenza ngokukhethekile ukuvula amandla weqiniso we-ATTO I-FastFrameTM nama-adapter weThunderLink.
Yini Okufanele Ikulindwe Ku-ATTO Ku-IBC 2019
Ukuthuthuka Kwebhizinisi Lomhlaba Wonke, Ubuchwepheshe Bezindaba e-ATTO Technology, Inc.
Ngale mikhiqizo emisha emaviki ambalwa ukuthi ingambulwe, akukho kungabaza ukuthi ngabe i-ATTO izokwazi ukuletha isikhombimsebenzisi sokuphatha okulula ukusetshenziswa uma ingumbuzo wokuthi kanjani. Impendulo ilula, futhi konke kungenxa yobungcweti benkampani ekugcinweni kwamanethiwekhi, kanye namandla abo okuhlanganisa wonke amathuluzi namasu okusetshenziswa kwethimba lobuchwepheshe obunamakhono amakhulu. Umbono omuhle wokuvelela lokhu waphinde wasekelwa UJeff Lowe osebenza kwiBusiness Development, Media Technologies kwa-ATTO. ULowe ukusho lokho "Imikhiqizo emisha esiyibonisa ku-IBC kulo nyaka ingumphumela wokuhlinzeka ngemakethe yeMedia & Entertainment iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu," "Abasakazi bayazi ukuthi oxhumana nabo njenge-ATTO bayakuqonda ukuhamba kwabo okuyingqayizivele futhi bayakwazi ukuhlinzeka ngezixazululo ezifanele kakhulu." Akunakungabaza ukuzethemba kweLowe kule Nyanga ezayo lapho i-ATTO iqhubeka ikhombisa ikhono lemikhiqizo yabo nokuthi bangawavula kanjani amandla aphelele kwinethiwekhi yemvelo yokukhiqiza nokuxhumeka kokugcina.
Ingqungquthela ye-IBC 2019 izoba ngoSepthemba 13-17 ngaleso sikhathi Isikhungo Somhlangano Sase-RAI Amsterdam e-Amsterdam, eNetherlands, kanye nombukiso we-ATTO Technology uzobanjelwa I-7.A26. Bonke labo abakhona bayakhuthazeka ubhalise ku-IBC 2019 ngokushesha.
Ukuthola eminye imininingwane yokuthi i-ATTO ingasebenza kanjani ukunikeza ukusebenza kahle kokuphuma kokuhamba komsebenzi, bese ubheka: www.atto.com ube nokuqonda okungcono kokuthi kungani emashumini amathathu edlule, baphumelele njengomholi womhlaba wonke wokuxhumana kwenethiwekhi nokugcina, kanye nokukwazi ukusebenzisa izixazululo zezingqalasizinda zezindawo ezihlanganisa idatha kakhulu.
I-ATTO 360 I-ATTO Technology CES2017 idatha Ukuphathwa Kwedatha Isitoreji sedatha I-Digital Nirvana OKWE I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-IBC ibc 2019 UJeff Lowe ukuqapha imidiya I-MStar SoftAtHome Ama-spears nama-Arrows Storage I-subtitling Thunderbolt Thunderlink I-TVU Izinethiwekhi Izinhlelo ezihlukahlukene esingokoqobo virtual	2019-08-21
Ngaphambilini: I-NAB Khombisa iNew York: Ukubuthana Okuphelele Kwabaqeqeshi Bemikhakha
Olandelayo: I-Argosy Imemezela Amanethiwekhi we-IP kanye Ne-Fibre Ingqalasizinda Etholakalayo